Ndị ọkachamara na-emepụta fatịlaịza Urea Granules Crusher Machine na-eweta ngwaahịa na ụlọ ọrụ | YiZheng
Na Fatịlaịza Urea Granules Crusher Machine bụ ụdị kemeghi ngwepịa igwe na-enweghị ákwà ngebichi ákwà e mere na ndabere nke na-amị elu dị mma ndinuak ngwá na anụ ụlọ na mba ọzọ. Ọ bụ otu n'ime akụrụngwa nke nwere ike tinye n'ọrụ na fatịlaịza na-azọpịa ma bụrụ ngwaahịa ngwaahịa nke ụlọ ọrụ anyị.
Gịnị bụ Fatịlaịza Urea Crusher Machine?
1. Fatịlaịza Urea Crusher Machine tumadi eji egweri na igbutu nke ọdịiche dị n’etiti igwe na concave plate.
2. nwechapụ size na-ekpebi ogo nke ihe ndinuak, na drum ọsọ na dayameta nwere ike ịbụ kemeghi.
3. Mgbe urea banyere n’ime ahu, o na-aru n’azu aru ya na ohi ya wee gbajie. Mgbe ahụ, ọ na-egweri ntụ ntụ site na ogbe dị n'etiti ala na concave plate.
4. Nwepu nke efere concave ga-edozi ya ruo n'ókè nke ịkụpịa site na usoro nhazi n'ime 3-12 mm, na onye na-achịkwa nri n'ọdụ ụgbọ mmiri nwere ike ịchịkwa olu mmepụta.
Tupu ojiji, edebe ihe ndị ahụ Fatịlaịza Urea Crusher Machine na otu ọnọdụ na omumuihe ma jikọọ ya na isi iyi nke ike iji. A na-achịkwa ọdịmma nke pulverization site na nkwụsị nke rollers abụọ ahụ. Obere oghere, ihe kacha mma, na mbelata njikọta. Ihe ka mma na-agbanwe agbanwe edo edo, nke ka elu na mmepụta ya. Enwere ike ịmepụta ngwaọrụ ahụ ka ọ bụrụ mkpanaka dịka ihe ndị ọrụ chọrọ si dị, na onye ọrụ nwere ike ịmegharị ọnọdụ kwekọrọ na ya mgbe ị na-eji ya, nke dị mma.
Akụkụ nke Igwe Fatịlaịza Urea Crusher Machine
1. Karịsịa maka ihe dị elu mmiri, ọ nwere ngwa siri ike ma ọ dịghị mfe igbochi, na ịchụpụ ihe dị larịị.
2. Ndinuak agụba adopts pụrụ iche ihe onwunwe, na ọrụ ndụ bụ ugboro atọ karịa ndị ọzọ crusher igwe.
3. Ọ nwere nnukwu ndinuak arụmọrụ; na-onwem na chọpụtara window na-eyi akụkụ imecha dochie na 10 nkeji.
Q1: Gịnị bụ Uru nke Urea Compound Fatịlaịza Crusher Machine?
A1: Otu akwụkwọ ikike otu afọ, ọ nwere ogologo ndụ ọrụ na ọrụ nke akwụkwọ ntuziaka anyị broshuọ.
Q2: Olee ebe ịtụ Urea onyinye Fatịlaịza Crusher?
A2: You nwere ike ịhazi ya na ntanetị site na Nkwado Azụmaahịa, anyị ga-enweta iwu gị ma zaghachi gị otu oge; Mgbe ị kwadoro igwe kwesịrị ekwesị ma tinye anyị site na Nkwenye Trade, anyị ga-edozi ibu ahụ n'oge.
Q3: you na-anabata OEM iwu pụrụ iche nke Urea Compound Fatịlaịza Crusher?
A3: OEM iwu puru iche di kwa n'ihi na anyi nwere ulo oru nke aka anyi, nke bu onye na - emeputa ihe na mpaghara a nwere otutu afọ 20
Q4: Gịnị bụ ezigbo nnyefe oge nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe gị?
A4: 5 ruo ụbọchị 7 maka ngwaahịa usoro izugbe, ka ọ dị ugbu a, ngwaahịa batch & ngwaahịa ahaziri ga-achọ ụbọchị 30 ruo ụbọchị 60 dabere na ọnọdụ dị iche iche.
Q5: Kedu ka ị si achọpụta ogo Urusia Fertilizer Crusher gị?
A5: N'ozuzu, akụrụngwa anyị bụ ndị na-adịgide adịgide nke ndị ahịa anyị n'ụlọ ma ọ bụ mba ọzọ. Na anyị nwere ahụmahụ àgwà otu, anyị na-agbalị na-enye gị ngwaahịa na nke kacha mma mma. Agbanyeghị, anyị ghọtara na ngwaahịa a nwere obere nke nwere ike ịbụ ihe mebiri emebi ma ọ bụ mebie.
Q6: Olee otu esi ere ahia gi? mebiri emebi?
A6: N'ime oge nkwekọrịta nke ọnwa 24, ọrụ izugbe anyị na-arụ ọrụ na-agbanwe akụkụ ndị mebiri emebi, mana ọ bụrụ na enwere ike idozi mmebi ahụ site na obere ụgwọ, anyị ga-echere ụgwọ onye ahịa maka ego mmezi ahụ ma kwụghachi akụkụ a. (Mara: tinye akụkụ adịghị etinye.)
Mmadụ Bịa gị ase na gara anyị factory!
Fatịlaịza Urea Crusher Machine Ngosiputa Video
Fatịlaịza Urea Crusher Machine oke
Central Anya (mm)
Ike (t / h)
Isi mmiri granularity (mm)
Charrụzu Granularity (mm)
Nke gara aga: Ugboro abụọ-axle Chain Crusher Machine Fatịlaịza Crusher
Osote: Chemical Fatịlaịza onu Mill Machine
Okwu Mmalite Gịnị bụ Agba-abụọ Fatịlaịza Crusher Machine? Igwe ihe eji eme ihe abuo nke uzo abuo bu ihe nkpuchi ohuru nke nwere ike ime ka ndi ozo di elu, shale, cinder na ihe ndi ozo mgbe ha nyochachara ogologo oge na nlezianya ndi mmadu sitere na uzo nile. Igwe a adabara ndinuak raw nwunye ...
Okwu Mmalite Gịnị bụ Ugboro abụọ Hopper Quantitative Packaging Machine? Igwe ihe eji eme ihe eji eme okpukpu abuo bu ihe eji aru oru, agwa, fatịlaịza, kemịkalụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, ịkwakọ ngwaahịa fatịlaịza, ọka, osikapa, ọka wit na mkpụrụ granular, ọgwụ, wdg ...
New Type Organic & onyinye fatịlaịza Gra ...
Okwu Mmalite Gịnị bụ New Type Organic & Compound Fatịlaịza Granulator Machine? Typedị Ọhụrụ Organic & Compound Fatịlaịza Granulator Machine na-eji ike ikuku eme ihe site na ngwa ngwa na-agbagharị n'usoro na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-eme ka ihe ndị dị mma na-agwakọta, granulation, spheroidization, ...
Okwu Mmalite Gịnị bụ Vetikal Disc inggwakọta feeder Machine eji? The Vetikal Disc inggwakọta feeder Machine na-akpọ diski feeder. Igbapụta n'ọdụ ụgbọ mmiri nwere ike na-achịkwa mgbanwe na orùrù nke ukwu nwere ike gbanwee dị ka n'ezie mmepụta ina. Na onyinye fatịlaịza mmepụta akara, Vetikal Disc Mixin ...
Okwu Mmalite Gịnị bụ Ewepụghị Die Fatịlaịza Extrusion Granulator Machine? Ewepụghị Die Fatịlaịza Extrusion Granulator Machine Ezubere maka ụdị dị iche iche na usoro. Igwe mpempe akwụkwọ na-adị larịị na-eji mpempe akwụkwọ ntuziaka, nke na-eme ka igwe na-agbagharị onwe ya n'okpuru ọrụ nke ike. Ihe ntụ ntụ bụ ...
Ugboro abụọ-axle Chain Crusher Machine Fatịlaịza ... ...
Okwu Mmalite Gịnị bụ Double-axle Chain Fatịlaịza Crusher Machine? Ugboro abụọ-axle Chain Crusher Machine Fatịlaịza Crusher na-abụghị nanị na-azọpịa lumps nke organic fatịlaịza mmepụta, kamakwa ọtụtụ-eji chemical, ụlọ ihe, Ngwuputa na ndị ọzọ ọrụ, na-eji akwa siri na-eguzogide MoCar bide yinye efere. Ndị m ...